Maxaad ka taqaan ‘Jeel Ogaadeen’? Wax Ka Baro Dhacdooyinka Layaabka Leh ee Ka Dhex Dhici Jiray Jeelkan Sanadihii U Dambeeyay | Baligubadlemedia.com
Maxaad ka taqaan ‘Jeel Ogaadeen’? Wax Ka Baro Dhacdooyinka Layaabka Leh ee Ka Dhex Dhici Jiray Jeelkan Sanadihii U Dambeeyay
1996 ayaa la aasaasay xabsiga dhexe ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, laakinse ay dadku u yaqaanaan “Jeel Ogaadeen”. Xilligaas waxaa madaxweynaha killilka ahaa Khadar Macallin Cali. Waxaa dhismaha xabsiga qandaraas lagu siiyey Ibraahim xaad oo ka mid ahaa ganacsatadii xilligaas ugu dhaqaalaha roonaa.
Labada nin – ee ninna uu qandaraaska dhismaha xabsiga bixiyey, ninna uu dhismihiisa qandaraaska ku qaatay – labada isaga ayaa markii dambe lagu xiray.
Qiayaastii ilaa 50 askari ayaa habeenkii waardiyeysa. Laba meel oo kala durusan ayaa laga kala waardiyeeyaa. Gaar hayaha hore, qiyaas hal KM ah ayuu u jiraa. Wuxuu leeyahay hal albaab oo weyn oo u sii jeeda dhanka waqooyi.
Qaybta dhexe waa qaybta lagu xiro dadka “rajada leh”, ee la aaminsan yahay in mar uun ay soo bixi doonaan.
Todobadii sano ee aannu soo dhaafnay, ma jirin maxbuus ay eheladiisu soo booqdeen. Horraantii todobaadkii aan soo dhaafnay ayaa markii ugu horraysay loo fasaxay tiro cayiman oo dad ah inay soo booqdaan dadkooda halkaa ku xiran.
Human Rights Watch: “Jirdil ayaa ka dhaca Jeel ogaadeen”
Madaxweynaha DDSI: Madaxa sirdoonka ayaa na handaday
2013 maxaabiistii xilligaas xabsiga ku xirnayd waxay sheegeen in maamulka Bakoorado looga soo iibin jiray “Fooqdheere” oo isla Jigjiga gudaheeda ah, ka dibna uu maxaabiista ku amri jiray inay is garaacaan, haddii ay diidaanna uu ku dalban jiray rag u diyaarsanaa inay garaacistaas fuliyaan.
Xilligaas waxaa loo yaqaannaa, sida ay maxaabiistii waagaas xabsiga ku xirnayd noo sheegeen “xilligii geerida iyo garaaca”.
Xilliyadii sannadahaa ka dambeeyey ee aadka loo ugaarsan jiray ONLF ayey maxaabiistu sheegeen in maamulka xabsiga uu soo rogay in cunnada iyo biyaha laga jaro maxaabiista, waxaana 24kii saac la siin jiray cunno hal mar oo qura, taasoo ahayd canjeerada loo yaqaanno Daafida oo la mariyey “Widdi”.
Sheekooyinka naxdinta leh ee maxaabiistu ka sheekeyeen waxaa ka mid ah „Gidhibka”. Waa meel biyo xireen ah oo ku taalla duleedka magaalada, waxaana la dhisay xilligii uu dalka maamulayey Mingiste. Ujeeddada loo dhisay biyo xireenkaas waa arrimo la xiriira tacbashada beeraha.
Qofka kaliya ee naga ogolaaday in aan magaciisa sheegno waa Suldaan Fowsi Suldaan Maxamed Cali oo xabsiga ku xirnaa muddo dheer. Wuxuu noo sheegay in shantii sano ee ugu dambeysay muddadii uu xirnaa, lagu hayey kaligii qol ciriiri ah oo uu ku qiyaasay laba mitir. Wuxuu kaloo sheegay in muddo bil ah maalin kasta bakoorado ay ku garaaci jireen “laba nin ilaa ay ka daalaan”.
“Ilaa maanta way igu soo kacdaa jugtii berigaa igu dhacday” ayuu yiri Suldaan Fowsi.
Maxaa loogu bixiyey Magaca “Jeel Ogaadeen”
Xabsigaas waxaa la yiraahdaa “xabsiga dhexe ee dawlad deegaanka Soomaalida”, hase yeeshee sababta jeel Ogaadeen loogu bixiyey ayaa ah maadaama dadka ku xirnaa 60% ay ahaayeen dad ka soo jeeda deegaanka Nogob. Waxay u badnaayeen taageerayaasha ONLF.
Inkastoo uusan dhisme ahaan ka weynayn 100 mitir oo dhan kasta ah, haddana dadkii ka soo baxay waxay aaminsan yihiin in tirada maxaabiista halkaa ku jirtay ay u dhaxaysay 33000 – 35000 oo qof. Waxaa jira dad ku dhex dhintay xabsiga sababo la xiriira daryeel la’aan.
Haddiise masaajid laga dhigo, halkaa miyuu ku hari doonaa magacii u baxay xabsigaas?